Skip the resume and the job fair | Martech Zone
Talata, Martsa 17, 2009 Alahady 5 Febroary 2017 Douglas Karr
Ny alahady dia niasa tamin'ny drafitra fanombohana hafa aho ary nifanakalo hevitra tamin'ny mpiara-miasa amiko rehetra momba ny mangarahara sy ny Internet. Tsy misy hafa amin'izany. Amin'ny maha mpitarika ny orinasa azy ireo dia mila mivoaka eo alohan'ny andian'omby izy ireo, mila mampahafantatra ny fisian'izy ireo, mila manana sary any izay hitan'ny olona. Mila mivoaka ivelan'ny akorany voajanahary izy ireo amin'ny fidirana ho fidirana raha tian'izy ireo hahazo vola isika ary hahita loharanom-bola.
Raha tsy an'asa ianao dia mila manao toy izany koa.
Ny orinasa iasako miasa dia manakarama. Tsy ho hitanao izy ireo amin'ny tsenambarotra asa miaraka amin'ireo orinasa lehibe izay mameno ny toerana farany any amin'ny toeram-pamboleny cubicle. Tsy ho hitanao mikorisa amin'ny famerenany koa izy ireo. Tsy ho hitanao koa izy ireo mividy toerana amin'ny tranokala sokajy tadiavina fanampiana an-tserasera.
Mahita mpilatsaka hofidina tsara izahay amin'ny alàlan'ny tamba-jotra mpiara-miasa aminay (ao anatin'izany ny orinasa mpametraka) ary mikaroka azy ireo ao amin'ny Google izahay hahitantsika ny fomba mety hahatongavan'izy ireo lasa orinasa media sosialy. Orinasa tena tsara izy io. Orinasa mitombo izy ity. Orinasa mampientam-po izy io.
Manokana ho an'ireo matihanina amin'ny marketing, esory ny akanjo ary afatory ary avoahy any ny anaranao. Tsindrio ny nofo amin'ny hetsika eo an-toerana, mitazà bilaogy iray, manolora tena hampianatra kilasy sasany ho an'ireo matihanina isam-paritra, ary hifandray amin'ny tamba-jotrao ary hanao consulting freebie ho azy ireo. Aza mipetraka eo ambony sezalà miandry ny telefaonan'ny telefaona.
Raha tsy an'asa aho dia tsy azoko antoka fa te hiasa amin'ny orinasa iray izay mbola manaraka ny andian'omby aho ary mitady am-pahalalana ireo kandidà mitovy amin'ireo tranonkala an-tserasera izay nampiasain'izy ireo folo taona lasa izay.
Ity no fotoananao, fotoananao, hivoahana eo alohan'ilay fonosana ary hanananao anarana ho anao.
Tags: exacthirefoara fanaovana asaasaLinkedInasa marketingCV
Fomba sy fahazoan-dàlana ary alalana
Mar 17, 2009 amin'ny 9: 49 AM
Ny ankamaroan'ny foara asa dia mitady asa tsy miankina amin'ny teknika na komisiona.
Mar 17, 2009 amin'ny 9: 51 AM
Diggin aho 'ny kalandrie wpng. Azoko ampiana amin'ny tranokalaniko izany.
Mar 17, 2009 ao amin'ny 4: PM PM
Tsenan'ny mpampiasa io. Raha ny mahazatra dia tsy afaka manakarama ny 10% ambony ianao, satria efa manana asa izy ireo ary tokony ho voasarika. Saingy androany, misy olona mazoto miasa mamorona ary tsy manana asa. Ny orinasa (toy ny mpampiasa an'i Doug Compendium) dia hendry manantena fa afaka manakarama ny tsara indrindra nefa tsy mila mihady.
Ny fangatahana asa amin'ny alàlan'ny varavarana fidirana dia tsy hevitra lehibe velively, ary raha mila asa tsara ianao dia mety handany fotoana amin'ity toekarena ity. Izao hanehoana ny fitiavanao sy ny fahaizanao mitady asa. Ny mpampiasa mendrika miasa dia hahafantatra ny ezaka ataonao ary hanome valisoa anao amin'ny toerana ambony.
Mar 18, 2009 amin'ny 8: 45 AM
Fombafomba fotsiny ny fizarana asa, amin'ny alàlan'ny fanovozan-kevitra ihany.
Mar 18, 2009 amin'ny 9: 27 AM
Ity dia lahatsoratra tsara iray, be loatra ny olona manototra ny tsenan'asa ary tsy misy zavatra vita. Raha mipetrapetraka ny olona ary mahatsapa ny toerana halehany hanakaramana azy dia tsara kokoa izany.
Mar 18, 2009 amin'ny 9: 44 AM
Nampiroborobo ny filana mandray anjara amin'ny haino aman-jery sosialy aho ary manangana ny ivon'ny fifandraisanao ao amin'ny LinkedIn sy ny hafa. Toa tsy toerana iray alehan'ny olona hahalala momba ny kandida iray fa ny laharana voalohany.
Eritrereto fotsiny raha efa nifandray tamin'ny tsenanao lasibatra ianao dia naneho hevitra tao amin'ny bilaogin'ireo orinasa ary nanaraka azy ireo tao amin'ny twitter. Hatraiza ianao no mahazo aina amin'izany resadresaka izany? Ny tena zava-dehibe kokoa angamba dia hoe hoatrinona ny mpampiasa no mahazo aina?
Manaiky aho Doug, ny olona izay vao nanomboka 6 volana lasa izay tao amin'ny media sosialy dia lavitra mialoha ireo izay mbola tsy nanomboka.
Mar 19, 2009 amin'ny 11: 55 AM
Tsara ny mahita fa tsy izaho irery no mahazo olona marobe mitady asa ao amin'ny media sosialy izay tsy manana piraofilina akory! Ratsy loatra ny hoe tsy mieritreritra ny hisafidy ny mpampiasa azy am-pahendrena ny olona sasany - fa te hahazo asa fotsiny - asa rehetra.